ओलीलाई गगन थापाको जवाफ, ‘कठैबरा! आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीवाट हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा घाइते गए कसरी उपचार गर्लान्’ ?
बिहिबार, साउन २८, २०७८ ६:४९
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कडा जवाफ दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संसदमा मन्तब्य राख्दै सरकारलाई धेरै प्रश्न उठाएका थिए । उनले द्धण्द्ध पीडितहरुको समस्या सरकारले नसुने आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आउन भनेका थिए ।
उनले सरकारले आन्दोलनमा भएका घाइतेहरुको उपचार नगरे एमाले पार्टी कार्यालय आउनु म उपचार गर्छु एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए । ओलीले गरेको यस्तो आह्वानको कडा प्रतिवाद गर्दै गगन थापाले आफ्नै उपचार खर्च समेत सरकारको ढुकुटीवाट गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको सुहाएन । उनले भने, कठै बरा आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीवाट हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा घाइते गए कसरी उपचार गर्लान् ?
साउन २६ गते पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक भनाई राखेका थिए । ओलीलाई प्रतिपक्षको भूमिका निकै सुहाएको उनको भनाई थियो । उनले अबका दिनमा पनि ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा मात्र राख्ने टिप्पणी गरे । उनले विहिवार संसदमा आफ्नो भनाई राख्न सुरु गर्दै ओलीको आलोचना गरेका थिए ।
भूमी फिर्ता कहिले ल्याउँछौ भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीर्लाइ २ सय बढी सांसदको समर्थन पाएका ओलीले किन गरेनन् ? भनेर प्रश्न उठाए । उनले ओलीलाई दिनको एउटा का ण्ड गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउने र ढाकछोप गर्नेले नै भ्रष्टाचारको कुरा गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरे । ओलीलाई गठबन्धनको संस्कृति भित्रिएकोमा चिन्ता लागेको भन्दै सांसद थापाले ओलीकै अहंकारको कारण गठबन्धन बनेको बताए ।